The Outsider (2020) – Gold Channel Movies
The Outsider (2020) HBO
ဒီ Serie က.. စတီဗင်ကင်းရဲ့ ဝတ္ထုကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်… HBO မှာအပိုင်းဆက်အဖြစ် ထုတ်လွင့်ပေးနေတာပါ…. ဒါကြောင့်မို့ gold channel ကတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်…
ဇာတ်လမ်းကတော့ ၁၁ နစ်အရွယ်ကောင်လေး အသတ်ခံရမှုကို ရက် အန်တာဆန်နဲ့ ရျော်လီ ဂင်ဘီစုံထောက်နစ်ဦးက စုံစမ်းထောက်လှမ်းတာကိုရိုက်ပြထားတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်…
ထိုသို့စုံစမ်းမှုမှာ… တရားခံက ဘယ်သူတွေဖြစ်နိုင်မလည်း…. ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေ ကြုံတွေ့ရမလည်း…. ဘယ်လိုတရားခံရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုကြုံတွေ့ရမလည်းဆိုတာ… ရိုက်ပြထားတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲလေးဖြစ်ပါတယ် ။
တယ်ရီမစ်လန်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက် ကျောင်းဆရာ ဖြစ်သလို ကလေးတွေကို အားကစားပွဲလေးတွေမှာ ပါဝင်နေကြသူတစ်ယောက်ပါ… တစ်နေ့မှာတော့ ပီတာဆန်ဆိုတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက် အသတ်ခံခဲ့ရပြီးနောက်မှာ… တယ်ရီ့ကို သံသယဝင်စရာတွေစလာပါတော့တယ်…
အလောင်းမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ သက်သေတွေ လက်ဗွေရာတွေက…. တယ်ရီရဲ့ အိုင်ဒီတွေနဲ့ ဆက်ဆပ်နေပါတယ်. ဒါတွေရဲတွေသိသွားပြီးတော့ပိုသေချာအောင် မျက်မြင်သက်သေတွေကိုလိုက်စ်တဲ့အခှန်မှာတော့…. တယ်ရီက ကပ် ဆိုတဲ့မြို့ထဲကိုရောက်နေတာပါ…
ဒီလိုနဲ့ပဲ ရဲတွေအတွက်အုန်းစားစရာ ပြသနာတွေစလာတော့တယ်…. တယ်ရီတစ်ယောက် အင်္ဂါနေ့မှာ လုပ်တဲ့ဆရာအစည်းအဝေးကို ဘယ်လိုတွေသွားသလည်း…. တစ်ချိန်ထဲမှာပဲကောင်လေးကိုရောဘယ်လိုတွေသတ်သွားသလည်းဆိုတာ…. စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအာင်နဲ့ မှုခင်းဆန်ဆန်ရိုက်ပြထားတာကြောင့်.. လက်မလွှတ်တမ်းကြည့်ကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ် ။
TMDB – 8.3
Win Naing PhyoApril 21, 2020Reply
end of wafa ဆုိတဲ့ pakistan series ​ေလး မတင္​ဘူးလား admin ရယ္​ ၾကည္​့ခ်င္​လုိ႔ပါ alwayes ur fan…
gcmoviesApril 30, 2020Reply
အပိုင်းတွေ အရမ်းများနေတတော့ မတင်ဖြစ်လောက်တော့ဘူးခင်ဗျ တင်နိုင်အောင်တော့ ကြိုးစားပေးကြည့်ပါ့မယ်